Nialàn’i Nepal ny #GoHomeIndianMedia, Fa Novàny Hoe #ComeBackIndianBarber · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2015 5:08 GMT
Olona mandao ny renivohitra ary mandeha miverina any amin'ny vohitra niaviany taorian'ilay horohorntay nehry vaika tao Kathmandu. Sary an'i Sunil Sharma. Fizakàmanana Demotix (28/4/2015)
Nisy fiantraikany henjana tamin'ny fiainana andavanandron'ny tao amin'ny faritra ny fifindràmonuna faobe avy ao Kathmandu Valley taorian'ireo horohorontany roa nifanesy. Ireo mpiasa mpanao arak'andro, ireo mpivarotra anana, ireo mpitàna toeram-pivarotana, mpamily, ary matianina avy amin'ny sarangam-piainana rehetra no nandao ilay faritra mba hiverina any amin'ny tanànany. Ny sasany niverina mba hanampy amin'ny asa fanarenana, na hizaha ireo havana sy olon-tsy foiny, raha ny betsaka kosa dia noho ny tahotra tsotra izao sy ny dona naterak'ireo hovitra nitohitohy tao ambanin'ny tongony tao.
Tao anatin'ny herinandro nanaraka ilay hovitra voalohany, efa ho olona 800.000 no lasa, niala an'i Kathmandu Valley. Taorian'izay, satria niverina ho toy ny isanandro ny fiainana, nanomboka niverina ny olona. Taorian'ilay hovitra faharoa tamin'ny 12 May anefa, nanomboka indray ny fifindràna.
Vokany, miatrika tsy fahampianà hery mpamokatra ilay lohasaha, toy ny filàna mpiasa hanao ireo fanamboarana maika. Toy izany koa, marary ny toekarena ao an-toerana, na dia niverina indray ho toy ny isanandro aza ny toe-draharaha. Araka ny tatitry ny Republica Daily, nampitarazoka ny fanarenana an'i Kathmandu ireny tsy fahampiana ireny.
Mitohy mampikatso ny fihodinan'ireo orinasa maro ao an-toerana ny fahatapahan'ny famatsiana ireo entana ilaina andavandro, ary niakatra be ny vidin-javatra. satria lasa zara raha misy ny asa ary lafobe ny saram-pitaterana.
Mpitondra kodiarandroa mandalo eny akaikin'ireo fatin-korontan'ireo trano nirodana tao Bhaktapur, Nepal. Sary an'i Sunil Sharma. Fizakàmanana Demotix (15/5/2015)
Nandao ny toerana ihany koa ireo mpanao taovolo maro tao an-toerana, ny ankamaroany avy any amin'ireo lemaka atsimon'i Nepal sy India mpiray vodirindrina. Noho io, maro ireo mpanao taovolo no nanakatom-baravarana ary tsy toy ny mahazatra fa sahirana mitady fotoana hanapahana volo ireo Kathmandoita. Filaharam-ben'ireo mpanjifa no hita eny amin'ireo trano fihetezana sisa mba mivoha, hany ka na ny fotoana hihinanan-kanina aza mila tsy hisy ho an'ireo mpanety.
Manoloana ny tsy fahampian'ny mpanety, nanomboka nampiasa ilay tenifototra lasa nalaza vetivety hoe #ComeBackIndianBarber (MiverenaRyIndianaMpanetyVolo) tao amin'ny Twitter ireo mpisera amin'ny aterineto:
Lasa lava be ny volo[ko]. Tsy mahita trano fihetezana [aho] na iray aza mba hanety ny volo. Izao lasa mila miantso mpanety avy eto amin'ny hoe #MiverenaRyIndianaMpanetyVolo
Niely be any anaty media sosialy hatramin'ireo sariitatra mampiseho lehilahy misarita-bolo. Ny sary iray mampiseho ny taloha sy ny ankehitriny, anehoana lehilahy iray taorian'ilay horohorontany, dia navoaka miaraka aminà volombava sy volo lava be.
Toy izay ihany, sariitatra iray hafa nataon'i Barun Pokhrel no mampiseho lehilahy maromaro miaraka amin'ny volo lava, volombava, mirenireny eny an'arabe, mitety ireo korontan-javatra navelan'ny horohorontany:
Ny vesatry ny fiankinan-doha. Kathmandu taorian'ny nandaozan'ireo mpanety azy ho any Motihari sy Darbhanga [India].
Ho valinteniny mikasika ny tsy fahampian'ny mpanety, voalaza fa mikasa ny hanomboka fandaharanasa vaovao iray ny Minisitry ny Indostria mba hanomezana fiofanana amin'ny fanetezana ho an'ireo tanora ao Kathmandu. Maminavina ihany koa ireo manampahefana ny hanome fiofanana ho an'ireo mpanao trano any am-bohitra any mba hanampy ireo teknisiana amin'ny fanarenana ireo trano any amin'ireo vohitra voadona tamin'ireo horohorontany.
Antsoina amin'ny anaram-petaka hoe “Bhaiya,” midika “rahalahy/anadahy” amin'ny Hindi, saika nojerena ambony ambany hatrany (nohambaniana) ireo mpanety tao Kathmandu. Taorian'ireo horohorontany anefa dia ry zareo ireo no isan'ny matianina tena tadiavina indrindra any amin'ny faritra. Izao no fotoana mety mba hanomezana haja ny asa sy hiantsoana azy ireny amin'ny anarana hafa (toy ny “dai” midika hoe zokibe amin'ny fiteny Nepali) izay mahafinaritra ireo mpanety. Araka izany tsy mahatsapa ho voatsiratsira ry zareo. Nibitsika aho hoe:
Nahoana #ComeBackIndianBarber (MiverenaRyIndianaMpanetyVolo) no fotsiny? #ComeBackTeraiBarber (MiverenaRyTeraiMpanetyVolo) koa mba avy any amin'ny lemaka atsimo. Fotoana izao hanovàna ny Bhaiya ho Dai